HARGEYSA, Somaliland - Wafdi uu hogaaminayo safiirka Turkiga ee dalka Somalia, Mehmet Yilmaz, ayaa booqasho ku tegay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka gooni isku taaga ah ee Somaliland, halkaasi oo lagu soo dhaweeyay.
Danjire Yilmaz ayaa kulan la yeeshay Madaxwayne Muuse Biixi Cabdi, iyo mas'uuliyiin kale oo kamid ah Gollahiisa Wasiiradda, oo uu kamid yahay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Yaasiin Xaaji Maxamuud.
Sidda laga soo xigtay war qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska Muuse Biixi, dhinacyadda ayaa isla gorfeeyay qodobo ku saabsan nooca xiriir oo ay yeelan karaan Somaliland iyo xukuumadda Ankara.
Wararka ayaa intaas ku daraya in qodobadda laysla soo qaaday ay kamid tahay wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland oo hakad ku jiro, kaasi oo dowladaha garwadeenka ka ah ay kamid tahay Turkiga.
Dowadda Farmaajo ayaa dhowr jeer wuxuu ku cel-celiyay inay ka go'an tahay in dib loo bilaabo wadaxaajoodyadda, balse, maamulka Hargeysa waxay shuruud kaga dhigeen inay noqdaan wadahadalo kuwa mirro dhal ah.
Socdaalka uu danjiraha Turkiga ku tegay magaalada Hargeysa ayaa wuxuu kusoo aadayaa iyadda oo Axadii uu halkaasi tegay wasiirka Gaashaandhiga Ingiriiska oo ay isla meel-dhigeen arrimo ku xeeran amniga gobolka.
Jubbaland oo soo dhaweysay doorashada Saciid Deni, una hambalyeysay
Soomaliya 08.01.2019. 20:12